Wepu Nhazi Page Design
Ndi Unsubs Page gị dị ka nke a?
Tuzdee, Machị 11, 2008 Na Tọzdee, Septemba 29, 2020 Douglas Karr
E debara aha m n'otu mkpọsa ụlọ ọrụ siri ike nke siri ike na-enye m. Ozi ịntanetị ahụ bụ ederede doro anya mana ha nwere nnukwu ogologo. Oge ọ bụla m mere ihe na saịtị ha, enwere m ọdịnaya dị iche iche dabere na ọrụ m (ma ọ bụ enweghị ọrụ). Taa anataara m ozi ederede edere nke ọma mana ekpebiri m ịhapụ onyinye ahụ wee wepu aha na email.
Lee ka ha si sị mbibi:
Chei! Nke a bụ ozi n'azụ a, “stopped kwụsịrị igwu egwu ka anyị banye na ọkpọ na-esote… lee ya!”
Naanị na-enweghị "lee ya!".
Atọ Atọ Maka Unsubscribe Landing Page:
Ndebanye aha na-arụ ọrụ - Nye ndenye aha na-edoghị isiokwu n’isi nna ukwu wepu aha ya. O nwere ike ịdị nfe dịka, “Edebeghi aha gị na mkpọsa ozi-e a, lee ụfọdụ isiokwu ndị ọzọ ị nwere ike inwe mmasị na:” yana onyinye iji họrọ ndị ọzọ. Nwedịrị ike ịgbalị ijikọ ihe na-akpali ya.
Ebumnuche maka wepu aha ha - Jụọ ihe kpatara ya! Gịnị kpatara ha wepụrụ aha? Ọ bụ ọtụtụ email? Ozughị? Enweghị mmasị? Ọ dịghị mkpọsa ozi email zuru oke, kedu ka ị na-ajụghị otu ị ga - esi mee nke ọma? Kelee ha maka isonye ma rịọ mgbaghara ma ọ bụrụ na ha ahọrọ ihe kpatara na-ekwu, "ị inu!".
Agbakwunye Nye - Jiri akwukwo ibe ahu were tinye ihe ndi ozo! Atụla onye a nnukwu ọcha ọcha peeji nke onye a! Ha nọ ya na mmasị na ebumnuche n'otu oge ma ọ bụ n'oge ọzọ (mgbe ha debanyere aha). Gini mere ị ga-eji gosipụta ngwa ahịa, ọrụ, akwụkwọ ọcha, wdg. Kedu maka profaịlụ mmekọrịta iji soro?
Mgbe m rụrụ ọrụ maka ExactTarget, etinyere m usoro ihe atụ a n'ogologo (na azụmaahịa mere nnomi na imewe). Peeji ahụ nwere ekele, nkwutọ banyere ExactTarget, njikọ ngosi ngosi ahaziri, yana njikọta na saịtị ha ndị ọzọ!
Mgbe ụfọdụ ọrịre na-amalite mgbe onye ahịa ma ọ bụ atụmanya na-apụ n'ọnụ ụzọ. Have nwere ohere ime mmetụta na-adịgide adịgide, echefula ya na ibe oghere!
Tags: kpachaara anyanna ukwu wepu aha yawepu aha nbudatawepu aha na ibe
Ndepụta nyocha blọgụ m…
Ihe Ọjọọ Thiszọ A Abịa…
M na-eche otu nne na nna m ochie (ma web-ikike) nne na nna ochie nwere ike isi kọwaa “ewepụrụ” (iche na ha nwere ike ịchọpụta otu esi wepu aha na ihe ọ bụla. Wepụrụ na thentanetị? Wepu na njikọ ha ọsọ ọsọ? Ewepu ha n'ụlọ ha? Enwere m ike iji anya nke uche hụ arịrịọ siri ike ha na-arịọ maka enyemaka….
Echere m na ọ ka mma karịa ịsị 'emenyụ ya' ma ọ bụ 'kwụsị'. 🙂
Douglas, nke a bụ ezigbo ego. Nwepu aha m abụghị nke ọjọọ n'ụzọ niile, mana ọ bụghị na-egbu maramara. M na-ajụ ihe kpatara na ha wepụrụ ma kelee ha maka ịgụ ihe.
Mana echere m na ọ bụ ezi echiche ịlọghachite ibe ahụ iji hụ ihe ha hụrụ ma hụ na ọ bụ ozi ịchọrọ ịhapụ ha.
Chris Raynes kwuru
Echere m na “ihu akwụkwọ ndabịa” ka mma. Mana enwere m hunch ọ baghị uru ọ gwụla ma ị na-echetara onye ọrụ banyere ozi ha na-edebanye aha na ya.
Ọ na-abụkarị, ọ bụrụ na mmadụ enwee nsogbu see njikọ wepu aha ya, ọ bụ ihe emerela.
Banyere mkparịta ụka na-ajụ ihe kpatara na onye ọrụ anaghị edebanye aha, ọ ga-amasị m ịhụ ụfọdụ stats doro anya gbasara ma onye ọrụ dejupụtara akwụkwọ yana ihe ha kwuru.
Onwe, mgbe a “Gịnị ka ị na-ahapụ” igbe ma ọ bụ na peeji nke ibu mgbe m na enen m chọrọ… M adịghị ọbụna na-eche maka na peeji nke mara tupu m kụrụ nchọgharị nso button.
Ekwenyere m na iwepu aha ahụ nwere ike bụrụ ihe emechara - ihe m kwuru bụ na ị nwere ike ịga n'ihu ịnwale ma wulite mmekọrịta gị na onye ahụ yana ịnye ha ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ.
N'ezie, echere m na otu ụzọ dị mma iji mee ka ibe dị ka nke a bụ iji nyochaa ngwungwu nyocha gị wee hụ ọtụtụ ndị na-emekọrịta MGBE wepu aha ha!